Onyankopɔn Papayɛ: Ɔhyɛ Yɛn Koma Mã | Bɛn Onyankopɔn
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Norwegian Nzema Oromo Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
‘Ɔhyɛ Yɛn Koma Mã’
Enti Yehowa dwen yɛn ho ampa? Anaasɛ nneɛma a nnipa refa mu wɔ asase so no mfa ne ho? Bible ma saa nsɛmmisa no ho mmuae, na ɛka koma paa. Nea ɛwom ne sɛ Onyankopɔn dwen nnipa ho yiye, na ɔpɛ sɛ yɛn ani gye wɔ asetena mu. Da biara da, Onyankopɔn yɛ nnipa nyinaa papa; ne papayɛ dɔɔso araa ma bonniayɛfo mpo, ɔma bi sõ wɔn so. Ma yɛnhwɛ asɛm bi a ɔsomafo Paulo kae.—Kenkan Asomafo Nnwuma 14:16, 17.
Saa bere no na Paulo rekasa akyerɛ Listrafo bi a wɔnsom Onyankopɔn, na ɔkae sɛ: “Awo ntoatoaso a atwam no mu no [Onyankopɔn] gyaa amanaman no nyinaa ma wɔfaa wɔn ankasa kwan so, nanso nokwarem no, wannyae ne ho adansedi efisɛ ɔyɛɛ papa, maa mo osu fii soro ne mmere a aduan ba, na ɔde aduan ne abotɔyam hyɛɛ mo koma mã.” Nnipa a na Paulo rekasa kyerɛ wɔn no, na wɔbɛfa asɛm no sɛn?
Ná ɛnyɛ den koraa sɛ Listrafo no bɛte Paulo asɛm no ase. Ná ɛhɔfo pii yɛ akuafo, na na wɔn asase no yɛ asase pa a nsu wɔ so. Nanso Paulo kaee wɔn sɛ Onyankopɔn na ɔma nsu tɔ, na ɔno na ɔma wɔn nnɔbae yɛ yiye. Enti sɛ wotwa wɔn nnɔbae na wɔde yɛ aduan di a, ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn ayɛ wɔn papa.
Asɛm a Paulo ka kyerɛɛ Listrafo no, ɛma yesua Yehowa Nyankopɔn ho nneɛma pa pii.
Yehowa nhyɛ obiara. Kae sɛ Yehowa maa Amanaman no kwan ma “wɔfaa wɔn ankasa kwan so.” Bible asekyerɛ nhoma bi kyerɛkyerɛ asɛm no mu sɛ “wɔyɛɛ nea wɔn ankasa pɛ” anaa “wɔyɛɛ nea ɛyɛ wɔ wɔn ani so.” Yehowa nhyɛ obiara sɛ ɔnsom no. Ɔnhyɛ obiara, enti yetumi de yɛn adwene yɛ adwuma kyerɛ nea yɛpɛ.—Deuteronomium 30:19.
Yehowa pɛ sɛ yehu no. Paulo kyerɛkyerɛɛ mu sɛ “wannyae ne ho adansedi.” Bible asekyerɛ nhoma no kyerɛ sɛ asɛm a Paulo kae yi, ebetumi nso akyerɛ sɛ “wada ne ho adi ama nnipa ahu Onyankopɔn ko a ɔyɛ.” Nneɛma a Onyankopɔn abɔ di “ne su horow a wonhu” no ho adanse pefee; ne su no bi ne papayɛ, nyansa, tumi ne ɔdɔ. (Romafo 1:20) Yɛkenkan Bible a, yebehu sɛ Yehowa aka ne ho nsɛm pii wom. (2 Timoteo 3:16, 17) Wunhu sɛ biribiara kyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ yehu no anaa?
Da biara da, Onyankopɔn yɛ nnipa nyinaa papa; ne papayɛ dɔɔso araa ma bonniayɛfo mpo, ɔma bi sõ wɔn so
Yehowa pɛ sɛ yɛn ani gye. Paulo kae sɛ ɔde ‘aduan ne abotɔyam hyɛ yɛn koma mã.’ Ɔbɔnefo a onnye Yehowa nni mpo tumi didi mee ma ne koma tɔ ne yam, na ɔte nka sɛ n’ani agye. Nanso Onyankopɔn pɛ sɛ yenya anigye mu anigye; anigye a ɛbɛtena hɔ daa. Sɛ yebenya saa anigye no a, gye sɛ yesua hu nea ɔpɛ ne nea ɔmpɛ, na yɛde bɔ yɛn bra.—Dwom 144:15; Mateo 5:3.
Da biara a ade bɛkye no, Yehowa yɛ yɛn papa. Onyankopɔn a ɔde ‘aduan ne abotɔyam hyɛ’ wo koma mã no, wunhu sɛ ɛsɛ sɛ wusua ne ho ade?
July Bible akenkan
Asomafo Nnwuma 11-28
Onyankopɔn ‘Hyɛ Yɛn Koma Mã’